Kusinde uMagashule i-ANC ihlehlisa impi enkulu eya kwi-NGC | Scrolla Izindaba
Kusinde uMagashule i-ANC ihlehlisa impi enkulu eya kwi-NGC
UNobhala jikelele we-ANC uAce Magashule usenomsebenzi wakhe ngemuva kokunxenxa ukuthi asuswe emacaleni enkohlakalo emhlanganweni we-virtual National Committee (i-NEC).
Kepha akakaphumi ehlathini okwamanje.
Impi yesikhundla sikaMagashule – kanye nokulwa okubanzi komphefumulo we-ANC nokuthi ibhekana kanjani nenkohlakalo – manje sekuhlehliselwe emuva emhlanganweni we-National General Council (NGC) ngoMbasa.
Amalungu e-NEC esikhulume nawo athi umqondo wokuthi kuphoqwe uNobhala-Jikelele we-ANC ukuba ashiye phansi wawungaqali.
Ukuchazwa okuningi bekungokobuchwepheshe, ngaphandle kokuvuma ngqo amandla ohlangothi lukaMagashule nolukaZuma.
‘Asikho isithangami esibizwa ngaphandle kwegunya lezithunywa zegatsha le-ANC esingasusa ilungu elihleli phezulu le-ANC,” kusho ilungu le-NEC e-Eastern Cape.
Elinye ilungu le-NEC lichaze ngobunzima ikhempu kaRamaphosa ebibhekene nabo ukuzama ukuphoqa uMagashule ukuba ehle esikhundleni ngokuzithandela.
“Ukube uSG ubenguNgqongqoshe kwikhabhinethi kaRamaphosa, i-NEC ibizoba nelungelo lokumutshela ukuthi ehle esikhundleni.
“Kodwa noma kunjalo, ungqongqoshe onjalo angahlala eyilungu le-NEC uma engakhethwa ukungena kwi-NEC engqungqutheleni.”
Iqembu elibusayo lilwela ukwenza isinqumo esathathwa yingqungquthela yalo yokukhetha ubuholi yowezi-2017 eyathi amalungu abhekene namacala kufanele ehle ezikhundleni zawo izinkantolo ize ithi akanacala.
Ngaphandle kwesibhakela esiyisithunzi emhlanganweni wezinsuku ezintathu we-NEC, amalungiselelo omdlalo wangempela aseqalile njengoba sekusele izinsuku eziyisithupha kuphela ukuba amalungu e-ANC avuselele ukuba ngamalungu.
Amalungu angenakho angekho esimeni esikahle angeke avunyelwe ukubamba iqhaza ezingqungqutheleni ezahlukahlukene zesifunda nezezifundazwe ezizobanjwa phakathi kukaMasingana noNdasa kowezi-2021.
Izithunywa ezingaphezu kweziyi-4,000 ezivela emagatsheni e-ANC zizobamba iqhaza engqungqutheleni yaphakathi nonyaka ye-NGC, okuyisithangami esinamandla kunazo zonke phakathi kwezingqungquthela zokukhetha ubuholi.
Ngisho noMagashule uyavuma ukuthi isithangami esifana ne-NGC singaba namandla okumehlisa esikhundleni.
Enkulumweni yakhe yokuvala ku-NEC, uMengameli uCyril Ramaphosa uthe iqembu liyaqhubeka “nokufuna ukwakha ubumbano ukuze amalungu atholane”. Usole amabutho angaphandle ngokwenza ukuthi kube noqhekeko ku-ANC – mhlawumbe akhohlwe ukuthi yena ngokwakhe ngoLwesibili uthe iqembu libukeka “liyinhlangano elwa nayo uqobo”.
Esitatimendeni ngoMsombuluko, uRamaphosa ukhombise ukuthi ufuna uMagashule ahambe.
Ngakho-ke umengameli uhlala esengozini – emaqenjini kaZuma nakaMagashule. Kepha inqobo nje uma esengathembela kwiphini likamengameli onamandla, uDavid Mabuza, ukuze ameseke, naye uzophila aze abone olunye usuku. Futhi mhlawumbe esinye isigaba soBengameli.